Mapurogini eBongo: Mapulagi ekuwedzera Kubudirira | Kubva kuLinux
Mapurogini eBongo: Mapulagi ekuwedzera kugadzirwa
Pashure 2 yapfuura zvinyorwa about the Brain app, iyo inotarisana kunatsiridza zvibereko revashandisi pamakomputa avo, tichazopedzisa neichi chechitatu bhuku racho kushambadzira zvirinani kugona kwayo nekushandisa akanakisa plugins yakaiswa uye inowanikwa mairi.
Izvo zvakakodzera kuti urangarire nekusimbisa kuti kunyangwe iyo Brain app has Makore maviri pasina kugadzirisa, inobvumira avo vane ruzivo rwakakosha, gadzira ako plugins uye vagovane navo munharaunda kuti varambe vachiwedzera mukana wekushandisa.
Nhasi, zvinoenderana nechikamu chiri plugins of the Cerebro yepamutemo webhusaiti paGitHub Ikozvino pane zvinotevera zvakasarudzika uye zvakajairika-shandisa plugins:
1 Exclusive shandisa zvishongedzo
1.1 Inosarudzika kune iyo MacOS Inoshanda Sisitimu
1.2 Inosarudzika neWindows Inoshanda Sisitimu
1.3 Inosarudzika kune iyo Linux Inoshanda Sisitimu
2 General Chinangwa Mapulagi
3 Ubongo Hwakawedzera
Exclusive shandisa zvishongedzo
Inosarudzika kune iyo MacOS Inoshanda Sisitimu
uropi-osx-vanobata: Inoshandiswa kubvumidza manejimendi yeruzivo nezve OS yekubata application
uropi-osx-tsanangura: Inoshandiswa kubvumidza manejimendi yeruzivo nezve OS application dudziro
uropi-osx-eject: Inoshandiswa kubata nekukurumidza eject yeOS yakakwira mavhoriyamu
uropi-osx-system: Inoshandiswa kubata iyo otomatiki yezvimwe zvinhu zveiyo OS system
pfungwa-iterm: Inoshandiswa kuzadzikiswa kwechero raShell rairo kubva mutsetse wekutsvaga, sekunge zvirizvo, kubva kune yekupedzisira application (koni) yeiyo OS
Inosarudzika neWindows Inoshanda Sisitimu
uropi-ndizvo-zvese-plugin: Inoshandiswa kubvumira kutsvaga data uye ruzivo uchishandisa iyo Zvese zvinoshandiswa kubva kuVoidtools. Zvese zvinhu zvekushandisa pakutsvaga desktop izvo zvinogona kukurumidza kuwana mafaera nemaforodha nemazita.
uropi-windows-system: Inoshandiswa kubata iyo otomatiki yezvimwe zvinhu zveiyo OS system
pfungwa-windows-ganda: Inoshandiswa kuzadzikiswa kwechero raShell rairo kubva mutsetse wekutsvaga, sekunge zviripo, pane yekupedzisira application (koni) yeiyo OS
Inosarudzika kune iyo Linux Inoshanda Sisitimu
uropi-linux-system: Inoshandiswa kubata iyo otomatiki yezvimwe zvinhu zveiyo OS system
uropi-hwindo-maneja: Inoshandiswa kunyora open windows windows woiisa kumberi kana kuvhara.
Kubudirira kune iyo yepamusoro: Mashandisiro ekushandisa iko Brain application mune zvakadzama?
General Chinangwa Mapulagi
Aya ndiwo mazita e zvigadzirwa zvepamutemo zvekushandisa kwese kana kwepasiresendiko kuti, dzinogona kushandiswa pane chero OS yakaiswa:
Sezvauri kuona, kune akawanda uye angangoita ese ane akasiyana mashandiro. Nekudaro, kune avo Vashandisi vasingape iyo Brain app pamusoro pavo GNU / Linux Distros kana ivo havangozvifarire, pane zvakanaka uye zvakapusa dzimwe nzira senge mhangura y Albert.
Sezvazvino, ini ndinoshandisa iyo Brain app nezvangu GNU / Linux Distro, Pasina matambudziko, saka, ini ndinokurudzira kushandisa kusiri kune maviri akasarudzika plugins e "Linux" (uropi-linux-system y uropi-hwindo-maneja), iwo mawedzero gumi anotaurwa pazasi ezvekushandisa zvinotevera, mamwe acho akatomisikidzwa nekutadza:
Google: Kuti utsvage pawebhu pane bhurawuza iyo yakagadzirirwa nekukanganisa.
Files Nav: Kuti uwane kuongororwa kwemafaira akaratidzirwa paunenge uchivhura OS nzira
Converter: Kuita yuniti uye mari (mari) kuyera kutendeuka uye nyore masvomhu mashandiro
Vhura Webhu: Kuongorora typed URL. Zvichienderana newebhu rakatsvaga, iyo icon (favicon / logo) yayo inogona kuunzwa kana kwete.
Tsvaga File Tsvaga: Kuongorora iyo faira system kubva kubha yekutsvaga.
turikira: Kuita shanduro kubva mumitauro yakasiyana siyana kuenda kuChirungu kubva kubhawa rekutsvaga.
Shell: Kuita mirairo nemhedzisiro yavo nzira iyo inotanga graphical application kana terminal mirairo, zvese zviri nyore uye zvakaoma, izvo zvinoita kuti ive yakanaka kuyedza Shell Scripting mirairo kubva kuDesktop.
IP: Kuti utarise network yedu kero dzakagadziriswa pamambure ekubatanidza kubva kubha yekutsvaga.
kunda: Kuunza kumberi hwindo chairo rechero ipi yemaapplication ari kushanda.
Cryptocurrency: Kufungidzira kukosha uye kuenzana kwezvakawanda zvemanje mari yedhijitari yeBlockchain Ecosystem.
Muchidimbu, sezvaungaona, zviripo mamwe akawanda anobatsira plugins izvo zvinogona kushandiswa, asi zvimwe inogona kusashanda zvinogutsa pane a Desktop Nzvimbo kana GNU / Linux Distro inotsanangura. Zvisinei, pane plugin inonzi «Raira Mugadziri"zvinoita gadzira chaiwo mashandiro, kunge a default yekuraira odha ita rimwe basa, iro rinopa iyo application yakawanda yekuchinjika.
Tinovimba kuti uyu wechitatu uye wekupedzisira "inobatsira shoma posvo" about «Cerebro», simbisa kuti hapana mubvunzo kuti inonakidza uye inoshanda yakavhurwa sosi uye muchinjiko-chikuva application, inobatsira zvikuru kugadzirisa yedu kubudirira pane madhesiki emakomputa edu; uye nokudaro, kuva nezvakawanda kufarira uye kushandiswa, Zvese «Comunidad de Software Libre y Código Abierto» uye yemupiro mukuru mukupararira kweinoshamisa, hombe uye kukura ecosystem yezvishandiso zve «GNU/Linux».
Kana kungo shanyira peji redu repamba pa KubvaLinux kana kujoina iyo yepamutemo Chiteshi Teregiramu kubva kuDesdeLinux kuverenga uye kuvhotera izvi kana zvimwe zvinonakidza zvinyorwa pa «Software Libre», «Código Abierto», «GNU/Linux» uye mimwe misoro ine chekuita ne «Informática y la Computación», and the «Actualidad tecnológica».
Yakazara nzira kuchinyorwa: Kubva kuLinux » Applications » Mapurogini eBongo: Mapulagi ekuwedzera kugadzirwa
SpaceX: tora vanoenda muchadenga uchishandisa Linux
PeerTube 2.2 inouya pamwe nekuvandudzwa kwekutora mafaera odhiyo, kurodha vhidhiyo, mushandisi mushandisi uye nezvimwe